​Ciidda iister-ka Masiixiyiinta iyo Maalinta Kormarridda (Passover) ee Yuhuuda​
​​Maalinta Kormarrida waxaa loogu dabaaldegaa oo lagu xusaa markii ay reer bini-Israa”iil ka soo baxeen Masar. Ilaahay ayaa iyaga ka soo furtay addoonsigii Masriyiinta. Habeen ka hor intaanay soo bixin, Ilaahay wuxuu soo diray malaggiisa dhimashada si uu u dilo curad kasta oo Masar ku noolaa.
Laakiinse, Ilaahay wuxuu Israa’iliiyintii u sheegay inuu qoys kastaa wan allabari ahaan u qalo, oo ay albaabadooda labada dhinac ka mariyaan wankaas dhiiggiisa. Markii uu malaggii dhimashadu dhiiggii arkay qoyskaa waxba muu yeelin. Dhiiggii wankii allabariga ah daraaddiis, dhimashadii iyo xukunkii way dhaafeen guryahaas!
​Ilaahay wuxuu Israa’iiliyiintii u sheegay inay sannad kasta xusaan oo u dabaaldegaan maalinta Kormarridda. Kormariddu waxay xasuus u ahayd wixii uu Ilaahay beryihii hore sameeyey iyo waxa uu mustaqbalka samayn doono. Wanka Kormariddu wuxuu sawir ka bixinayaa baahida loo qabo allabari dadka ka ilaaliya dhimashada. Waxaa kaas loo qalay inuu calaamad u sii noqdo dhacdo mustaqbalka dambe dhici doontey.
​Ciise Masiix: Wanka Ilaahay ee Runta ah!​
Ciise Masiix waxaa loogu yeedhaa “Wanka Ilaahay” (Injiilka, Yooxanaa 1:39, 36). Isaga ayaa noqday Wankii Kormarridda ee adduunka oo dhan, si uu bini’aadanka dembiga iyo dhimashada abadiyanka ah uga badbaadiyo. Ciise Masiix oo keliya ayaa Wanka Kormaridda noqon karey waayo wuxuu ahaa qofka keliya ee aan abidkii dembaabin. Ciise Masiix wuxuu ahaa Quduus!
Sannadkii 33 Ciise Kaddib, maalintii Kormarridda oo Jimce ku beegnayd ayaa Ciise Masiix iskutallaabta lagu qodbay. Isagu wuxuu kaamilay hawshii Ilaahay u soo diray. Wuxuu noqday allabari kaamil ah oo Ilaahay raalli ka hayay. Wuxuu yidhi, “Kanu waa dhiiggayga axdiga cusub oo kuwo badan loo daadshay dembidhaafkooda aawadiis” (Injiilka, Matayos 26:36).​
Muxuu “Jimcaha Wanaagsani" u “Wanaagsan” Yahay?
Masiixiyiintu waxay hadda Jimcahaas ka horreeyey iister-ka ugu yeedhaan Jimcaha Wanaagsan (Good Friday). Dad badan baa la yaaba in maalintaa “wanaag” loogu yeedho maaddaama ay tahay tii Ciise Masiix la diley. Laakiisne waxay u fiican tahay dhammaan dadka uu allabariga u noqday. Isagu wuxuu qurbaan u noqday dembiyada bini’aadanka oo dhan (Injiilka, Markos 10:45).
Dembiga oo ay ka xoroobaan ayaa loogu ballanqaaday kuwa aqbala allabarigaa Ciise Masiix ee uu (ciqaabtii) dembiyadooda ku soo gudey, kuwii hore iyo kuwa mustaqbalkaba. “Haddaynu dembiyadeenna qiranno, isagu waa aamin iyo caaddil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo, oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan” (1 Yooxanaa 1:9).
Rumaynta ​Ciise Masiix oo KELIYA ayaad kaga Badbaadi Kartaa Dembiga iyo Ciqaabta Abadiyanka ah (Naarta).
Ilaahay waa Quduus oo Isaga iyo dembi meel ma wada joogi karaan; Isagu marna dembi ma aqbalayo. “Waayo, mushahaarada dembigu waa dhimashada…” ayaa Erayga Ilaahay ku caddaynayaa (Rooma 6:23). Si kasta oo aan isugu dayno inaan ehlu-diin u noqono iyo ficillo badan oo aynu ajar ku shaqaysanayno midkoodna dembi badnaanteena ma beddeli karaan oo quduus inagama dhigi karaan. Xalku maaha in ficillo-diimeed badan la sameeyo, waayo, Ilaahay wuxuu xaqnimada aynu kartideena ku samayno ku tilmaamay sidii “dhar dhammaaday oo wasakh ah” (Ishacyaah 64:6). XALKU WAA, inaynu aqballo xaqnimada Ilaahay ee uu mar horeba inagu siiyey Ciise Masiix dartii.
Ciise Masiix waa hadiyadda Ilaahay. Wuxuu ina siiyey hadiyadda badbaadada. “Hadiyadda bilaashka ah ee Ilaahay waa nolosha weligeed ah…” (Rooma 3:23). Maaddaama uu Ciise Masiix dembi la’aan ahaa, allabarigiisa oo keliya ayaynu u baahannahay. Waa hal allabari oo kaamil ah oo buuxiyey doonistii qaynuunka Ilaahay, abadiyan iyo dadka oo dhan. Ciise Masiix ayaa allabarigaas ah.​ ​
Dabaaldegga iister-ka Waxaa lagu Xusaa Sarakiciddii Ciise Masiix
Ciidda iister-ka oo maalin Axad ah ku beegan looma dabaaldego dhimashadii Ciise Masiix. Taas waxaa la sameeyaa Jimcaha Wanaagsan. Laakiinse, iister-ka waxaa loo dabaaldegaa oo lagu xusaa Ciise Masiix guuleystey. Dhimashadiisii khasaare may ahayn. Dhimashadiisii kaddib, Axaddii ayuu Isagu noloshiisii la soo noqday, oo soo sarakacay, xasuuso inuu isaga oo naftiisa ka hadlaya Injiilka ku yidhi, “Ninna igama qaado, laakiin anaa iska bixiya. Waxaan leeyahay amar aan ku bixiyo, waanan leeyahay amar aan haddana ku soo qaato …” (Injiilka, Yooxanaa 10:18). CIISE MAXIIS AYAA AH SARAKICIDDII KOOWAAD.
Walaalkayga Soomaaliyeedow, weli ma laguu sheegay inuu Ilaahay adiga ku jecel yahay, oo uu qiimo weyn u bixiyey sidii aadan u halaaganteen, laakiinse aad u lahaan lahayd nolosha weligeed ah (jannada quduuska ah, halkaas oo dembi ka nasahan oo ay ku deeqayso inaad Ilaahay la joogtid oo aad Isaga abadiyan caabudid).
Dembidhaaf, badbaado, iyo nolol abadiyan ah midkoodna kuma helaysid inaad meel kale u haajirtid oo aad dhagax madow (sanam) ku soo warwareegtid, kuma heleysid inaad xoollo badan allabari ahaan u qashid, ma shaqaysan kartid adiga oo camallo badan oo wanwanaagsan samaynaya oo ajar uruursanaya, kumana heleysid inaad ku salidid oo daba joogtid mid aan isaga laftiisu ogeyn inuu nolol weligeed ah leeyahay iyo in kale ama janno iyo cadaab ta uu geli doono!
Erayga Ilaahay waa cad yahay; allabariga keliya ee kaamilka ama quduuska ahaa ee Ciise Masiix ayaa adiga kuu furay jid aad Ilaahay kula nabdi kartid, oo ruuxiyan cunuggiisii ku noqon kartid, oo hubaal ahaan u ogaan kartid inaad dhaxlayso nolosha weligeed. Xaqiiqadan ayaa Erayga Ilaahay ku qoran, "Mid kale badbaadada lagama helo, maxaa yeelay, ma jiro magac kale samada hoosteeda oo dadka dhexdiisa loo bixiyey oo waajib inoo ah inaynu ku badbaadno" (Falimaha Rasuullada 4:12). Ciise Masiixa quduuska ah ee nooli/jiraa wuxuu si isku kalsooni leh u awoodaa inuu yidhaahdo, “Anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha. Ninna Aabbaha uma yimaado, xaggayguu ku yimaado maahee” (Iniilka, Yooxanaa 14:6).
Wakhtigan barakaysan, Ilaahay dhammaantiinba ha idinka xorreeyo Shaydaanka, ka u yimid oo keliya inuu “wax xado oo dilo oo halleeyo,” oo ha idin garansiiyo inaad rumaysataan Ciise Masiixa u yimid oo u jooga, “inaad nolosha haysataan oo aad badnaan u haysataan" (Injiilka, Yooxanaa 10:10). Aamiin.
aadbaan kaaga mahad celinayaa ereyga rabbiga aad had iyo jeeraale nala wadaageyso walaal
aadbaan kaaga mahad celineynaa abdi
waxaan illaah kaaga baryayaa inuu ku dhowro oo kugu sugo rumeysadka rabbiga iyo inuu xoog dheeriya kuusiyo baahinta ereygiisa, waxaanku weydiisanayaa magaca rabbigeena badbaadiyeheena ciise masiix, amen
Somali Believers Felloweship
Adaa mudan walaalkayo Mo Haji. Ilaahay ha ku dhawro adna meel aad dunida ka joogtidba. Waad ku mahadsan tahay ducadaada iyo dhiirrigelintaadaba.